Umbani womhlaba noma inhlansi, into engajwayelekile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umbani we-globular noma i-flash, into encane kakhulu ebonwayo
Isithombe - Weekend-perfil.com
Njengokungathi bekuyisiqalo sendaba ethusayo, ezikhathini ezimbalwa kube lula ukubona esibhakabhakeni lokho okwaziwa ngokuthi i-globular ray noma i-spark. Ibhola elikhanyayo elikhanyayo elimangaza wonke umuntu olibonayo ukuthi lihlobene nokuduma kwezulu.
Isikhathi eside bekuthathwa njengenganekwane, inkohliso noma umkhiqizo womcabango wabanye abantu. Kepha manje sekwaziwa lokho kuyinto ekhona ngempela, yize kungakaziwa okuningi ngaye okwamanje.
Yize kungakacaci ukuthi yakhiwa kanjani, ochwepheshe bakholelwa ukuthi amandla anika ukukhanya akhiqizwa yinhlanganisela yamakhemikhali ekhishwa kancane. Ukuzama ukuthola okuningi, bazamile ukuzidala kumalabhorethri, kepha ngaphandle kwemiphumela ekholisayo.
Okwaziwayo njengamanje ukuthi ngesikhathi sesiphepho sikagesi, kungenzeka ukuthi kuyenzeka ukuthi sakheke. Uma kunjalo Kungathatha ukwakheka okuhlukile: i-ovoid, eyindilinga, izinyembezi noma okwenduku. Ubukhulu bungabuye buhluke kakhulu: phakathi kuka-10 no-40cm, ngakho-ke kuyinto ebonakalayo engafani nokuyibona emoyeni ovulekile kunakwidokhumentari evela kuwe usofa.
Yize ihlala imizuzwana embalwa, ngaleso sikhathi iyakwazi ukudala umonakalo. Ngo-Okthoba 21, 1638, esimweni esibizwa nge- 'The Great Storm' esinye sazo wachitha uphahla lwesonto laseSan Pancracio, esifundeni saseDevon (eNgilandi). Emlandweni wethu wakamuva kakhulu, eyodwa yabonakala ngoFebhuwari 25, 2012, edolobheni laseRosario (e-Argentina). Lapho, ufakazi wehlelwa ukuqhuma komunye wabo ngesikhathi esekhishini lomuzi wakhe.
Lesi yisenzeko okwadonsa amakhulu eminyaka sihehe ukunakwa okukhulu kulabo abanenhlanhla yokukubona. Uma umuntu evela eduze nasekhaya, zizwe ukhululekile ukusithatha isithombe: kunambalwa kakhulu okubhaliwe okubhaliwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Umbani we-globular noma i-flash, into encane kakhulu ebonwayo
Igumbi lokuphela komhlaba alizange likhukhuleke (futhi ngeke liphinde lisebenze)
Imifino yokushintsha kwesimo sezulu i-Antarctica